FANENDAHANA ENY AMIN’NY FARITRA 67HA ATSIMO : Tovolahy iray maty voatsatok’antsy
Faritra mena no sady efa betsaka ireo olona mody hariva lasibatra eny 67 ha Atsimo manodidina ny Cenam sy ireo toerana fiandrasana taxibe eo anoloan’ny Jirama sy paositra eny an-toerana. Andian-jiolahy efa mivondrona amin’ny tambajotra matanjaka mihitsy ireo mpandrava ka antsy lavalela miampy sabatra ny fitaovana fampiasan’izy ireo. 14 février 2019
Na andro antoandro aza ireo olon-dratsy dia mbola sahy manao ny asa ratsiny ary tsy afa-bela no sady manaraka hatramin’ny ainy mihitsy ireo izay tratra mody hariva raha sendra ka mifanena amin’izy ireo. Araka ny loharanom-baovao voaray dia voalaza fa olona miisa roa avy namboly hazo handeha hody indray no voaendak’ireo jiolahy miisa efatra raha ny fitantaran’ilay naman’ity namoy ny ainy. Nitondra antsibe sy sabatra ireto farany ary tonga dia nandrahona ny hamono tsy misy hatak’andro raha toa ka tsy manome ireo kitapo teny ambozonan’izy ireo.
Nibaradaka, nifona ary nandohalika haingana ity namany izay tena raiki-tahotra ka nanome tsy an-kisalasala ny kitapo teny aminy. Ity farany nindaosin’ny fahafatesana kosa namaly ireo olon-dratsy ka tamin’izay fotoana izay no nahavoatsindron’antsy azy ka maty tsy tra-drano. Tafatsoaka niaraka tamin’ny entana halatra moa ireo nahavanon-doza.
Marihana anefa fa mbola vao 25 taona monja ity tovolahy ity ary anisan’ireo nanangana ny fikambanana “Malagasy Youth Biodiversity Network” no tena nahafantaran’ny olona azy. Manoloana ity tranga ity dia manao antso avo amin’ny fitondrana sy ny mpitandro filaminana ny havan’ny mana-manjo mba hijery akaiky an’ireo endrika fanendahana amin’ity Faritra tena malaza ratsy eto an-drenivohitra ity. Faritra betsaka mpivezivezy mantsy no maro rahateo koa no efa naratra mafy sy namoy ny ainy, manginy fotsiny ny fananana very.